न नोटले न भोटले, सरकारको सहयोग बिना आफ्नै प्रयासले नेपाल चिनाउने हिरो ! «
न नोटले न भोटले, सरकारको सहयोग बिना आफ्नै प्रयासले नेपाल चिनाउने हिरो !
प्रकाशित मिति : 21 December, 2018
काठमान्डौ । विश्व शारीरिक सुगठनमा नेपालका महेश्वर महर्जनले स्वर्ण पदक जित्न सफल भएका छन् । थाइल्याण्डको चाङमईमा भइरहेको १० औँ विश्व शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनशिपमा महेश्वरले शनिबार साँझ पुरुष ७५ केजी तर्फ स्वर्ण जितेका हुन् । १२ खेलाडी सहभागी उक्त स्पर्धामा भारतीय खेलाडी दोस्रो र सिङ्गापुरका खेलाडी तेस्रो भएको नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिट्नेस सङघका उपाध्यक्ष दिनेश राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
अन्तरास्ट्रिय स्तरको बडी बिल्डिंग प्रतियोगितामा नेपालको पाएको यो सफलता अहिलेसम्मकै ठूलो हो । ३५ वर्षका महर्जनले यसअघि भुटानमा आयोजित ५० औं एसियन बडिबिल्डिङ च्याम्पियन सीपमा पनि स्वर्ण जितेका थिए ।
नेपाली खेलाडीले विश्वस्तरमा स्वर्ण जितेको यो पहिलो पटक हो । गत वर्ष नेपालकी ननिता महर्जनले महिला एथ्लेटिक्स फिजिक्स १६० मा रजत पदक जितेकी थिइन् ।
बिजेता महेश्वर मानन्धरको तौल समुहमा रहेका सबै १२ देशका बडीबिल्डरहरु हरुलाई जितेर उनि तौल समुहमा बिजेता बनेका हुन्। यो संगै उनि टप ५ मा पुगेका थिए। टप ५ मा नेपालका महेश्वर संगै भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, उब्जेकिस्तानका बडीबिल्डर रहेका थिए । शनिबार लोटस होटलमा भएको फाइनल राउन्डमा महर्जनले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै स्वर्ण जित्न सफल भए । भारतका जयप्रकाशले दोस्रो स्थान प्राप्त गरे भने सिंगापुरका खेलाडी तेस्रो स्थानमा पुगेर चित्त बुझाउन पर्यो ।
यो पनि हेर्नुहोस :
घर बनाउदै हुनुहुन्छ ? यी तिन सिमेन्ट गुणस्तरहिन
काठमाडौँ, ५ पुस । तीनवटा ओपिसी सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टमा मात्राभन्दा बढी म्याग्नेसियम देखिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको जाँचमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग (नवलपरासी), अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग (रुपन्देही) र शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग (बारा)बाट उत्पादित हुने सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अधिकतम देखिएको हो ।
अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म म्याग्नेसियम हुनुपर्नेमा नापजाँचका क्रममा त्योभन्दा बढी देखिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । पाँच प्रतिशतभन्दा बढी म्याग्नेसियम भएको सिमेन्ट गुणस्तर मानिँदैन ।
विभागले म्याग्नेसियम बढी भएका सिमेन्ट उद्योगलाई कम म्याग्नेसियम भएको सिमेन्ट उत्पादन गर्न पत्राचारसमेत गरेको छ । कम म्याग्नेसियम उत्यादन नगर्ने सिमेन्ट उद्योगको इजाजतपत्र खारेज गर्ने विभागले जनाएको छ ।
आफ्नो आमालाई खोज्न कश्मिरबाट काठमाडौं आएकी चेलिले आमा र बहिनीलाई भेटेपछि (भिडियो)
काठमाडौं । गएको सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रममा काठमाडौंमा आफ्नी आमालाई खोजिरहेकी कश्मिरकी मेहेक बानुको कथा देखायौं । मेहकको रिपोर्ट प्रशारण गरेको भोलिपल्ट उनकी आमा र बहिनीसँग उनको भेट भएको छ । ठाउँ ठेगाना नम्वर केही नभएपनि ११ वर्ष पुरानो फोटो देखाउदै उनी सडकमा आफनी आमा खोजिरहेको देखेपछि हाम्रा कसै दर्शकले उनलाई हाम्रो कार्यालय पु¥याई दिएका थिए ।
आजको सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रममा पुरा रिपोर्ट हेर्नुहोस :
बाबाले छोडे पछि प्यारालाइज आमा र बहिनि पाल्न सेक्युरिटी गार्ड गर्दै हेमा (भिडियो)
काठमाडौँ । एक जिम्मेवार छोरीले आफ्नो आमाको लागी सेक्युरिटी गार्ड गर्दै जीवन यापन गरिरहेकी छन । हेमा राई जो आफ्नो बुबाले छोडेर गएपछी आमा र बैनीलाई आफ्नै बलबुतामा पालिरहेकी छन । बुबाले छोडे पछि प्यारालाइज भएकी आफ्नी आमाको उपचार पनि त्यहि सेक्युरिटी गार्ड गरेर भ्याईरहेकी छन् । उनी सानै उमेरमा विदेश पनि गएर फर्की सकेकी छन् ।
हेमासंगको कुराकानीमा उनी भन्छिन – काम सानो ठुलो हुदैन, मुख्य कुरा आफु सन्तुष्ट हुन सक्नु पर्छ । आफ्नो पेशा प्रति उनि गर्व गर्छिन र सकेसम्म ड्युटी राम्ररी निभाउने कोशिस गर्छिन ।
उनै हेमासंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस :
कुनै दिन होटेलमा भाडा माज्थे सुनिल शेट्टीका बुबा, अहिले सुनिलले किने त्यहि भाडा माझेको जग्गा र बनाए आलिसान बंगला (हेर्नुहोस २२ तस्बिर)
एजेन्सी। बलिवुड अभिनेता सुनिल शेट्टी हिजो आज फिल्ममा हैन आफ्नो ब्यबसायमा चाहि ब्यस्त छन् । बलिवुडमा राम्रै करियर भइरहेको बेला उनले ब्यबसायलाई प्राथमिकता दिएका थिए । यतिबेला आफ्नी पत्नी माना शेट्टीसँग आफ्नो फार्महाउसमा समय बिताइरहेका छन्।
आफ्नो बिजी जिन्दगिबाट केहि समय निकालेर उनि आफ्नो पत्नीसंग यसरी समय विताउने गरेका छन । उनको फुर्सदको पलको फोटो सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ। ६२ सय स्क्वायर फिटमा फैलिएको ल्याशिव भिल्लामा प्राइभेट गार्डन, स्विमिङ पुल डबल हाइटको लिभिङ रुम र पाँच बेडरुम किचन छ। सुनील शेट्टीको यो फार्महासउसलाई नेचुरल ब्यूटीलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ।
अहिले सुनिल शेट्टी भारतका धनाड्य मध्यमा पर्दछन । तर रोचक कुरा के छ भने उनका बुबा भाडा माझ्ने मजदुरी गर्दथे । २०१३ मा आप्नो नयाँ डेकोरेशन शोरुम लन्च गर्ने बेला सुनीलले भनेका थिए–यो त्यही ठाउँ हो जहाँ मेरा बुवा वीरप्पा शेट्टी काम गर्नुहुन्थ्यो।’ वर्लीस्थित यो रेस्टुरेन्टमा सुनीलका बुवा वर्षौ पहिला वेटर थिए र प्लेट सफा गर्ने काम पनि गर्थे।
लामो संघर्षपछि १९४३ मा सुनीलका बुवाले एउटा पूरै भवन किने जुन वर्ली फोर सीजन होटल नजिकै छ। सुनिलले सामाजिक संजालमा शेयर गरेको केहि तस्बिरहरु तल हेर्नुहोस :
सन्नी लियोनीको आइटम गीत युटुबमा सार्बजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ३ पुष । पुर्व पोर्न स्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी अहिले चलचित्रमा भन्दा पनि आइटम डान्समा जमेकी छिन् । पोर्न फिल्मलाई चटक्कै छोडेर बलिउडमा छिरेकी उनले भर्खरै मात्र एउटा नेपाली गीतमा पनि आइटम नृत्य गरेकी छिन् । नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’मा समावेश उक्त गीतमा उनले आइटम डान्स गरेकी हुन् ।
गायिका नेहा कक्करको गीतमा उनले अभिनय एवं नृत्य गरेको एक म्युजिक भिडियो सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।
उनले अभिनय गरेको ‘लभ्ली एक्सिडेन्ट’ बोलको गीतले अहिले युटुबमा तहल्का मच्याउदैछ । यस गीतमा भने चर्चित कमेडियन कृष्णा अभिषेक पनि साथमा देखिएका छन् ।
कपिल शर्माको फ्यानहरुलाई खुसीको खबर, अन्तत कपिल शर्माले ‘द कपिल शर्मा शो’ फेरी ल्याउने भएका छन् (हेर्नुहोस नया शोको प्रोमो)
एजेन्सी । चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा भर्खरै विवाह बन्धनमा बाधिएका छन । विहे लगत्तै अब उनका फ्यानहरुलाई अर्को पनि खुसीको खबर आएको छ । उनले आफ्नो चर्चित प्रोग्राम ‘द कपिल शर्मा शो’ अब छिट्टै सोनी च्यानल मार्फत नै लिएर आउदै छन । उनको धेरै लामो समय पछीको टिभीमा कमब्याक हो यो।
शोको प्रोमो पनि सार्बजनिक भइसकेको छ । प्रोमोमा सलमान खान, सलीम खान, रणवीर सिंह र सारा अली खान देखिएका छ । सबै स्टारहरु मज्जाले हासेको देख्न सकिन्छ । यसको मतलव उनले शोको सुटिङ्ग पनि गरिसकेको बुझिन्छ ।
डाक्टर मसुर गुलाटी अर्थात सुनिल ग्रोबरसंग मनमुटाव भएपछि एकाएक बन्द भएको शोमा धेरै लामो समय पछी कपिलले नया इपिसोड सुरु गर्न लागेका हुन् । कपिलको गएको शो मा साथै रहेका चन्दन, कीकू शारदा र सुमोना चक्रवर्ती नयाँ सीजनमा पनि उनीसँगै हुनेछन् । शो मा रोशेल रावका साथै कमेडियन भारती सिंह र कृष्णा अभिषेक पनि देखिनेछन् ।
सुनिल ग्रोबर भने उक्त शोको हिस्सेदार हुने छैनन् ।
प्रियङ्काको फेरी अर्को बेडसिन, सार्बजनिक भयो ‘अनागत’को टिजर (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, ३ पुष । ‘कथा काठमान्डू’ बेड सिङ दिएर सर्बत्र चर्चा अनि आलोचनाको सिकार बनेकी नायिका प्रियंका कार्कीले बेड सीन दिएको फेरी अर्को चलचित्रको टिजर सार्बजनिक भएको छ ।
२५ जनवरीमा रिलिज हुने चलचित्र ‘अनागत’को टिजर सार्वजनिक भएको हो । चलचित्रमा प्रियङ्का कार्कीसँगै अर्पण थापा, प्रवीण खतिवडा र बालकलाकार रोसिन सुवेदीको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
माउन्टेन रिभर फिल्म्स र टाइनी बट बिग पिक्चर्सले निर्माण साइकोलोजिकल थ्रिलर फिल्मलाई साम्तेन भुटियाले निर्देशन गरेका हुन् ।
फिल्ममा अर्पण थापा र प्रियङ्का कार्की श्रीमान् श्रीमती हुन् , जसले सुखी वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छन् । यी दुईको जीवनमा मनोविज्ञानले निम्त्याउने परिस्थितिलाई नै फिल्ममा मनोरन्जनात्मक हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ ।
टिजर हेर्नुहोस् :
पुन्टे देखिने नेपाली कुस्तीबाज देव मगरसंग भारतका एक से एक पहलमान थर थर, यसरी पछार्छन बडेमानका कुस्तिवाजलाई ! (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, २ पुस । पुरै माटो बिच्छ्याइएको मैदानमा खेलिने कुस्ती खेल हेर्दा लाग्छ के यस्तो पनि खेल हुन्छ र ? तर यहि खेलबाट नवलपरासीका एक युवाले आफुलाई चर्चित बनाएका छन् ।
हेर्दा सानो कदको अपत्यारिलो देखिने नवलपरासीका देव मगरले भारतमा आफ्नो कला देखाएर निकै राम्रो प्रसंशा बटुली रहेका छन् ।
देवले आफुभन्दा ठूला ठूला र बढेमानको शरिर भएका व्यक्तिहरुसँग कुस्ती खेलेर जितेपछि उनको चर्चा बढेको हो ।
देख्दा सानो भएपनि उनले जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि सजिलै पछार्न सक्छन् । भारतमा भएका हरेक प्रकारका दंगल प्रतियोगितालाई जित्दै गर्दा आजभोली भारतमा उनको नाम सुनेपछि कयौँ कुस्तीबाजी खेल्नेहरु डराएर भाग्ने गरेको बताइएको छ ।
थापा पहलमान नामले पूरै भारतमा चर्चा बटुल्न सफल रहेका देवको कुस्ती हेर्न लाखौँ मानिसको भिडि लग्ने गर्छ । पछिल्लो समय उनी किङ अफ दंगाल, रियल सुल्तान जस्ता उपनामले चिनिन थालेका छन् । आज सम्म उनी भारतमा भएका खेलमा सहभागी भएका खेलमध्ये एक खेलमा मात्र हारेका थिए ।
चर्चित माता सबिता आचार्यले बनाइन आलिसान घर, उनको घर पुग्दा जे देखियो (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । माता सबिता सरु आचार्यले थप नया भबिस्यबाणी गरेकी छ्न । पछिल्लो समय नेपाली नेताहरुमा नेकपा का नेता माधव नेपाल को धेरै आलोचना भै रहेपनी सबै भन्दा राम्रो भबिस्य नेता नेपालकै चलिरहेको बताएकी छिन ।
माता सबिताले माधव नेपाल ढिलो चाडो पुन प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको र उनी पुन प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गरेकी छिन । बिगतमा रौतहटबाट चुनाव हारेका बखत पनि माता सबिताले माधव नेपालबारे भबिस्यबाणी गर्दै संसद हारेपनी माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भबिस्यबाणी गर्दा माधव नेपाल आफै अबिस्वास गर्दै हासेका थिए । तर अन्तत हारेर पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्ने भाग्यमानी बनेका थिए र माताको भबिस्यबाणी सत्य साबित भएको थियो । यसपटक पनि उनले नेकपा नेताहरुमा माधव नेपाल पुन मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको भबिस्यबाणी गरेकी छ्न ।
आफ्ना केही अघिल्ला भबिस्यबाणीहरुलाइ समेत पुन स्मरण गर्दै नेपालमा राजतन्त्र फर्कने र राजा ज्ञानेन्द्र साह नै मुलुकमा पुन राजा हुने कुराको ठोकुवा गरेकी छ्न । उन्ले यो भबिस्यबाणी मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरेको तेस्रो दिन प्रथम पटक गरेकी थिइन। उनमा रहेको दैबी शक्ति बारे थुप्रै मानिसहरुले बिस्वास गर्दै आएका पनि छ्न । आफ्नो बिवाहा बारे असुभ रहेकाले जीवन भर अविवाहित नै रहने र आफू भक्ती साधनामै रहेर दुखी र पिडितहरुको सेवा र सनातन हिन्दु धर्म जगेर्नाको निम्ति समर्पित हुने कुरा समेत बताइन ।
माता सबिताले अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थल असुभ स्थानमा रहेकाले अन्यत्र सार्नु पर्ने सार्न असम्भव भए बास्तु मिलाउनु पर्ने कुरा पुन दोहोर्‍याएकि छ्न । साथै आफ्नो सेवालाई आफ्नै इच्छा अनुरुप नेपाल सरकारको करको दायरामा ल्याएर आफुले देश प्रतिको कर्तव्यमा समेत जोडिएको बताएकी माताले दैबी आस्था र बिस्वासमाथी बिकृती बिसङ्गती देखिएको प्रती गुनासो गर्दै वास्तविक सत्य भन्दा परका भ्रममा ठगी र चोरी चाकरी नगर्न पनि सबैलाई सचेत गरेकी छ्न। भर्खरै मात्र नया आवासमा सरेकी माताले आफुसग दर्शन भेट र उपकारका निम्ति आउने भक्तजनलाई अब धेरै सहज हुने बिस्वास समेत ब्यक्त गरेकी छ्न ।
ओली बस्ने प्रधानमन्त्री निवास नै अशुभ ठाउँमा, अझै काटमार, रक्तपात हुने : माता सबिता सरु आचार्य (हेर्नुहोस् भिडियो)
भक्तपुर। धनकुटा जिल्लामा २७ वर्षअघि ७ महिनामा आमाको कोखबाट जन्मिएर ७ बर्षमा नै अलौकिक शक्ति ज्ञान पाएकी हाल काठमाडौंमा बस्दै आएकी नेपाली माता सविता सरु शर्मा आचार्य अहिले निकै चर्चामा छिन्।
उनले अहिलेसम्म नेपालका नाम चलेका राजनीतिज्ञदेखि लिएर चर्चित कलाकार, उद्योगपतिहरु र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, हिमानी शाह, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, शेर बहादुर देउवा, नायिका रेखा थापालगायतका दर्जनौ चर्चित अनुहारहरुको भूत, भविष्य र वर्तमान हेरिसकेकी छिन्।
सर्वसाधारणहरुसमेत गरेर अहिलेसम्म झण्डै १३ लाख जनाको भविष्य हेरिसकेको बताउने सवितालाई भक्तजनहरुले माताजी भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन्। साथसाथै उनी अहिले देश विदेशमा नेपाली माताजीको नामबाट नै प्रख्यात छिन्।
माता केहि समय अघि देखि काठमाडौँबाट बाहिर थिइन्। उनी आफ्नो जन्मथलो इटहरीमा गएकी थिइन्। केहि समय उनको शरीरले आराम चाहेकोले पनि उनी आफ्नो घर गएको उनले बताइन्।
अहिले उनी पुन: काठमाडौँ आइसकेकी छिन्। फेरी उनको व्यस्तता पहिलाको जस्तै भइसकेको छ। उनको घरमा भविष्यवाणी गराउन आउनेको भिड नै छ। केहि रकम लिएर उनले भविष्यवाणी हेर्दिने गरेकी छिन्।
माताजीको हालसालैको भविष्यवाणी अनुसार , ‘ संबिधान सभाको संसद भवन पनि ठिक ठाउँमा छैन २०६४ साल देखि मैले यो कुरा भन्दै आएको छु,त्यही भएर किच किच बढी पर्छ, मिटिंग राखे पनि वार्ता सफल हुँदैन, बालुवाटार प्रधानमन्त्रि बस्ने ठाउँ पनि ठिक ठाउँमा छैन, यी दुई वटा ठाउँहरु अशुभ छन्। ‘
लामो समय देखि अरुको भिविष्य हेर्दै आए पनि उनलाई भिडियोमा गालीगलौज गर्नेको पनि एक जमात छ। त्यस्तो नकारात्मक कमेन्ट गर्नेलाई माताजीले आक्रोश हुदैँ भनिन् ,’ भविष्यवाणी गर्दिदा, तपाईको यस्तो उस्तो हुन्छ भंदिदा किन आक्रोश पोख्नु हुन्छ, किन गालीगलौज गर्नु हुन्छ। यो त मेरो पेशा हो। मैले कसैलाई ठगेको छैन। कसैको केहि बिगरिदिएको छैन। ‘
माता सबिताको अगाडी अहिले सम्म न सुनिएको प्रतिभाको खुलासा गरे गायक नीलमणिले ! भिडियो हेर्नुहोस
काठमाडौँ । सबिता सरु शर्मा आचार्य २०४५ सालमा धनकुटामा जन्मिनु भएको हो । उहालाई ७ वर्ष को उमेर देखि नै अलौकिक शक्तिको ज्ञात भएको हो । माताका वाणीहरु, मानिसले घमण्ड र रीष गर्न छाडौ ऑफै ऊन्नति र प्रगति हुन्छ, हरेक मानिसको जीवन जिउन साँच्चै काहां सजिल छ र? एक न एक तनाव ले सधै पछि लागेर पछ्याईरहन्छ।, कसैले बोलेर मात्र हुदैन काम गरेर पनि मन जित्न सक्नुपर्छ।, जो व्यक्ति आफनो रिसलाई आफनो टाउकोमा खन्याउन सक्षम हुन्छ ,उसलाई अरुको रिसबाट बच्नुपर्दैन।, ऋण र शत्रुलाई कहिल्यै पनि ठूलो हुन नदिनुस, प्रार्थना गर्ने ओठ भन्दा सेवा गर्ने हात अघि सार्नुस यो नै धर्म हो, मँन राम्रो भएपछी सबै कुरा राम्रो देखिन्छ ऑफ्नो ऑखाले, रिसाऊनु भनेको ऑफ्नै मनको शान्तिलाई भष्म पार्नु हो, कसैको बारे नकारात्मक सोच राखेर प्रत्यक्ष क्षण बिताऊनु भन्दा ऑफ्ना लागि सकारात्मक तरिकाले सोच्नु अमूल्य समयको सही सदुपयोग हो ।
आजको बिशेष लोक दोहरी गायक सर्जक निलमनी भण्डारी माता सबिता सरु शर्मा आचार्यको निवासस्थानमा पुगी मातासंग आफ्नो दुख: पोख्दै लाइव भिडियोमा उपस्थित हुनु भएको जानकारी हामीलाइ दिनु भएको छ र त्यहि बिशेस सम्बन्धित भिडियो हामीले तपाई हरु को सामु राखेको छौ ।
हेरौ भिडियो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिव पदमा पुनः रमेशकुमार
तेक्वान्दो सङ्घमा आबद्ध १२ कर्मचारीको बिदाइ
काठमाडाँै, १२ साउन । नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले आफनो सङ्घको केन्द्रीय
अर्को महिना बेइजिङगमा फुटबल प्रतियोगिता हुने
कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा पहिले प्रभावित भएको चीनको राजधानी बेइजिङमा अर्को महिना
–विक्रम गिरी काठमाडौँ, १० साउन । नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले